Islaamka iyo Cilmiga Sayniska By. Ibraahim Khadar Siciid Qaybtii 23aad | Araweelo News Network
Islaamka iyo Cilmiga Sayniska By. Ibraahim Khadar Siciid Qaybtii 23aad
Waxyaabaha uu ku soo kordhiyey xisaabtay iyo faysigiska waa qaar aan la soo koobi karin. Tusaale ahaan xisaabta, waxa uu horumariyey fallanqaynta xisaabta Geometry, isagoo soo saaray xidhiidhka ka dhaxeeya xisaabaadka Algebra iyo Geomerty. Waxa uu si fiican u daraasadeeyey socodka walxaha, waxaannu ahaa qofkii ugu horreeyey ee ogaada in walxuhu dhaqaaqoodu yahay mid joogto ah ilaa uu yimaado xoog dibada ah oo joojiya amma beddelaya jihada ay ku socdeen. Arrintana waxay u muuqta in ay ku filan tahay sharciga dhaqaaqa walxaha (Law of Motion).
Tirade buuggaagta uu qoray oo kor u dhaaftay 200 waxa ka badbaaday oo gacanta lagu hayaa wax aad u tiro yar, xata buuggii cilmiga indhaha uu ka qoray waxa uu badbaaday isagoo luuqada Latin lagu turjumay. Intii lagu guda jiray waqtiyadii qarniyada dhexe buuggaagtiisa laga qoray Barashada Koomka (Cosmology) waxa loo turjumay luuqadaha Latin, luuqada Yuhuuda ee Hebrew iyo qaar kale oo badan.
Qoraalada uu diyaariyey waxa ku jira waxyaabo badan oo Muslimka aqoontiisa ka hadlaaya iyo aragtiyaha uu caalamka ku soo kordhiyey. Ib Al Hatiham waxa uu saamayn badan ku leeyahay dunida faysigiska iyo waliba xisaabta, waxaannu ku jiraa dadka darajada sare ka gaadhay aqoontaas… la soc